Ekhulwini lama-XXI lanamuhla, abantu baphila ukuphila okucebile nokusheshayo. Ulwazi lokugeleza lwazi futhi luphoqa ubuchopho ukuba busebenze ngokuqinile. Ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba, imvelo engalungile, engenakwenzeka (noma, njalo, ukungathandi) ukuhlela ukudla okunembile nokugcwele kuholela ekuqinisweni ukuthi ngisho nasencane kakhulu, kunezifo ezinjalo ekupheleni kwe-XIX nasekuqaleni kwekhulu lama-XX ubudala asebekhulile begula .
Ukuze uvikele umzimba womuntu ezinkingeni nasezifo ezinjalo, noma okungenani uhlehlise isikhathi sokuthuthukiswa kwawo, izimboni zamanje zamakhemikhali nezamakhemikhali zakha uchungechunge lonke lwezinhlelo zokwelashwa. Esinye esinjalo yi-Metamax. Imiyalo yokusetshenziswa itusa ukuyithatha izifo ezihlukahlukene nezingozi.
Emkhakheni wezokwelapha, i- "Metamax" ibhekwa njenge-cardio ne-angioprotective agent (i-ango - compress, i-cqueze, i-choke, i-defender-defender), ene-antianginal kanye ne-antihypoxic. Ngesisindo esinzima ischemia (ukunciphisa okwedlulela kwegazi, okuvame ukubangelwa izifo ze-vascular - ukuvala okuphelele noma ukunciphisa umshini), lesi sidakamizwa sikwazi ukubuyisela ibhalansi phakathi kokuthuthwa kwe-oksijini emzimbeni nokusetshenziswa kwayo ngamaseli. "Methamax" iyakwazi ukuvimbela ukuphazamiseka kokuthutha kwe-ATP. Indima yalesi sici (ATP) ezinkambisweni ze-metabolism namandla emzimbeni womuntu ihlukile. Okubaluleke kakhulu ukuthi i-ATP (i-adenosine triphosphate) ingumthombo wamandla wendawo yonke kunoma yiziphi izinqubo ezenzeka eziphilayo eziphilayo ezingeni lezinto eziphilayo. Ngokuhambisana nokulawula kwe-ATP yezokuthutha, i- "Methamax" isebenza inqubo ye-glycolysis (i-glucose oxidation), ehambisana nokugcina amandla ngendlela ye-ATP.
Imfundo yokusetshenziswa kwe- "Metamax" ichaza ububanzi obubanzi besenzo semithi. Kubaluleke kakhulu ekwelapheni okuphelele kwesifo senhliziyo. Umphumela omuhle uzotholakala ekutholeni "i-Metamax" uma kwenzeka ukuhluleka kwenhliziyo esimweni esingavamile, ngokubonakaliswa kwe-angina pectoris, i-infarction ye-myocardial, i-cardiopathy yemvelo yedyshormonal. Imiphumela emihle ingatholakala nangokwehluleka endaweni yokusakazwa kwe-cerebral (uhlobo olungapheli lokungakwazi ukusebenza, ukushaywa komqondo). Futhi, imithi ihlelwe ezinye izinkinga ngesistimu yokuphefumula. Lapha singakhuluma ngezifo ezinjenge-bronchitis ngesimo esingavamile, isifo se-bronchial se-infectious--erger nature. Uma kwenzeka izifo ezingapheli ze- pulmonary sphere, i-Metamax nayo ingamiswa njenge-immunomodulator (njengenye yezingxenye zokwelashwa okunzima).
Imfundo ilawula ukwamukelwa kwayo ezinkingeni nezinhlaka zokubona (i-hemophthalmia, i-central vein thrombosis ye-retina yamehlo namagatsha awo, ukubola kwe-retina yemvelaphi ehlukahlukene, i-retinopathy).
Futhi, lesi sidakamizwa sinqunywe ukuqhutshwa ngokomzimba okwedlulele (kubaluleke kakhulu kubagijimi), ngehla kwezinga lokusebenza kahle. Njengengxenye yezokwelapha eziyinkimbinkimbi, "i-Metamax" inqunyelwe ukuhoxiswa kwe-withdrawal syndrome, isici sokudakwa ngokweqile. Imfundo ekusetshenzisweni kwe "Metamax" ikuvumela ukuyisebenzisa ekunciphiseni isikhathi sokuvuselela emva kokungenelela kokuhlinzwa.
Ifomu lokukhululwa kwemithi "I-Metamax"
Abakhiqizi banikela ngemithi kubathengi ngendlela yama-capsules kanye nezixazululo ezingenakulungiswa. I-capsule eyodwa iqukethe ama-250 mg wezinto ezisebenzayo eziphambili ze-drug-propionate dihydrate (trimethylhydrazinium). Isidakamizwa sithengiswa emabhaltini eseli (amakhisula ayishumi munye). Iphakethe ngalinye linamabhansela amane - ama-capsules angu-40.
Enye indlela yokukhululwa - i-"Metamax". Ku-ampoule eyodwa iqukethe 5 ml yemithi. Umthamo wesidakamizwa ngu-100 mg / ml. Iphakethe elilodwa liqukethe ama-ampoules angu-10. Futhi enye indlela yokukhululwa (ama-capsules nama-nyxes) anabathengi bayo.
Izimpawu zokusetshenziswa kwamaphilisi "I-Metamax"
Imithi yokwelapha inconywa ukuthatha phakathi nengxenye yokuqala yosuku. Imithi yokwelapha kanye nesilinganiso semithi ingahluka kakhulu ngokuya ngesifo, ukuqina kwayo, isimo sesiguli.
Iziguli eziphethwe isifo sokuphefumula esine-infonous--erger, "amaphilisi e-Metamax" avame ukubekwa kanye ngosuku, i-capsule eyodwa izinsuku ezingu-21. Ngamafomu okungavamile kokusabalalisa kwe-cerebral - 500 mg (ama-capsules amabili) we- "Metamax" emini. Inkambo yokwelashwa ingadlulela ezinyangeni ezilodwa kuya kwesigamu. Udokotela ozofika angase aphakamise futhi izifundo ezingu-2-3 kulo lonke unyaka, kuye ngokuphila kahle kwesiguli.
Uma ngemuva kwe-dystrophy ye-myocardial isiguli sine-cardialgia, khona-ke imfundo ithatha ukuthatha imithi kabili ngosuku 250 mg ngesonto elilodwa lamasonto amabili. Uma ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kunikezwa izifo ohlelweni lwe-cardiovascular, ukusetshenziswa kwe "Metamax" kumthamo we-500 mg kuya ku-1 gramu kuvunyelwe. Ungathatha i-dose yansuku zonke ngesikhathi, futhi ungawahlukanisa ukuze uthole i-reception kabili ngosuku. Inkambo yokwelashwa kwezifo ezinjalo ngokuvamile ihlala inyanga nengxenye.
Lapho kunzima ngokweqile (ngengqondo, ngokomzwelo, ngokomzimba) imfundo yokusetshenziswa kwe- "Metamax" ilawula ukuwamukela izikhathi ezine ngosuku olufika ku-250 mg ngesikhathi sokusukela ezinsukwini ezingu-10 kuya kumaviki amabili. Uma kunesidingo sokuphinda inkambo yokwelapha, kuvunyelwe ukukwenza ngemva kwamasonto amabili ngemuva kokuphela kwesonto langaphambilini. Kubantu abahlanganyele emidlalweni yezemidlalo kanye nokubhekana nokukhululeka ngokomzimba nangokomzwelo, ngesikhathi sokulungiselela umncintiswano kunconywa ukuthatha u-1 g wemithi (ivolumu yansuku zonke ukuhlukanisa ngokudla kabili) esikhathini esingamaviki amathathu. Enkambweni yemidlalo yezemidlalo, ungathatha imithi. Imodi yesicelo ivela ezinsukwini ezingu-10 kuya kumaviki amabili.
Iziguli ezibhekene nezinhlobo ezingapheli zokudakwa ngokweqile zivame ukubeka ama-500 mg womkhiqizo wokwelapha izikhathi ezine ngosuku (isilinganiso somthamo wansuku zonke - 2 g). Isikhathi sokwelashwa singadlulela kusukela ngesonto ukuya ezinsukwini ezingu-10.
Izimpawu zokusetshenziswa kwezijova "I-Metamax"
Izithako zomjovo "Metamax" (imijovo) imiyalelo yokusetshenziswa ilawulwa ukwamukela ukuze kuthuthukiswe umphumela wokusebenzisa amaphilisi. Isibonelo, ukungavamile kokusabalalisa kwe-cerebral kuvame ukuphathwa nge-capsules. Kodwa-ke, esigabeni esiyingozi salesi sifo, odokotela bahlinzekela ukujova kokuqala amaviki angu-10 kuya kwangu-3 (ngaphakathi), bese ushintshela kuma-capsules. Nakuba izinhlobo ezingapheli zalesi sifo zingelashwa ngamaphonji (500 mg, nge-intramuscularly, once ngosuku).
Uma isiguli sinenkinga yemisipha ngamehlo, noma uma i- retystrophy ye-retinal ikhona , ama- ophthalmologists futhi anikeze ukwelashwa ngendlela yejojo ye-parabulbar injection. Ngokuvamile, inkambo yokwelashwa ihlala izinsuku ezingu-10. Khona-ke ukwelashwa kuyaqhubeka ngosizo lwamaphilisi. Isilinganiso kanye nemodi yesicelo - kusuka ku-500 mg kuya ku- 1 g ngosuku lomuthi "I-Metamax".
Imiyalo yokujova ikuvumela ukuba unikeze ukwelashwa kweziguli eziphuza ngokweqile. Ezimweni ezinjalo, kunconywa ukuphatha imithi ngokuphindaphindiwe kabili ngosuku, kumyinge we-500 mg. Inkambo yokwelapha ngokuvamile ihlala ezinsukwini ezingu-7-10.
Ukungafani kokuthatha i- "Metamax"
Njenganoma imuphi umuthi, "i-Metamax" iphikisana neziguli ezinokuzwela komuntu ngamunye ezingxenyeni zomuthi. Ungabeki "i-Metamax" (imiyalelo yokusetshenziswa iqukethe ulwazi olunzulu mayelana nalokhu) ngokucindezela okukhulu okungahambi kahle okubangelwa ukuphulwa kokuphuma kwamagciwane noma izicubu ezingenayo i-intracranial. Akuvumelekile ukusebenzisa imithi iziguli ezinezilonda eziphilayo zesistimu enkulu yezinzwa. Azikho izibalo ezithinta i- "Metamax" emzimbeni wesifazane okhulelwe nowesifazane okhulelwe, emzimbeni wezingane. Ngakho-ke, lezi zigaba zeziguli nazo aziwabi izidakamizwa.
Ukulungiselelwa "iMetamax" imfundo ichaza ezinye izimo ezimbi ezingase zihambisane nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Isimo senhliziyo somzimba womuntu singaphendula ngokuthatha imithi ngokunciphisa ukucindezelwa kwegazi, i-tachycardia (ukwenyuka kwenhliziyo).
Kusukela ohlelweni lokugaya kungase kuhlakulele i-dyspepsia (okungavamile ekusebenzeni kwegciwane lomzimba, inhlungu, inzima yokugaya inqubo). Ukuphendula okungajwayelekile kwi-"Metamax" iziguli ziveza ukubonakala kwezilwane ngendlela yokukhwabanisa isikhumba, ukuzamazama. Ngezinye izikhathi ungazwa mayelana nokukhathazeka kwesistimu yezinzwa eziphakathi.
Ukudlula umthamo owamukelekile kanye nezici zokuthatha lesi sidakamizwa
Kule mithi "i-Metamax", ukudlula ngokweqile kubonakala ngokwanda kwezenzakalo ezimbi. Okokuthi, iziguli zithwala ngokweqile, ukwehla okukhulu kwegazi, ukubonakaliswa okukhulu kwe-dyspepsia kusukela emgodleni wokugaya: isicashu, ukuhlanza.
Ukuqeda lezi zibonakaliso, abasebenzi bokunakekelwa kwezempilo ngokuvamile benza izinqubo zokugcoba esiswini, futhi kunqunyelwe ukuba bathole ikhambi likasawoti. Kwezinye izimo, akuyona into engafanele ukuba ne-enema yokuhlanza. Okulandelayo, ukwelashwa okuphawulekayo okuhlose ukuqeda izimpawu zokudlula ngokweqile "kwe-Metamax" kwenziwa.
Abasebenzi bezokwelapha kufanele baqaphe ngokumisela lesi sidakamizwa kanye ne-nitroglycerin noma i-nifedipine, ama-adrenoblockers ahlukene, ama-vasodilators emiphakathini. Ngokubili, le mithi ingabangela isiguli ukuba sibe ne-tachycardia ene-palpable, ukwanda komfutho wegazi. Kodwa inhlanganisela ye "Metamax" ne-glycosides ekwelapheni iziguli eziphethwe amafomu angapheli kwenhliziyo isamukelekile ngokuphelele. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ukusetshenziswa okuhlangene ngemithi yokwelashwa ukuze uphathe iziguli ezine-asthma.
Uma inkambo yokwamukelwa isikhathi eside ngokwanele, kuyoba nemfanelo yokulawula imisebenzi yesibindi nezinso.
Imbonini yanamuhla yemithi ikhiqiza izifaniso zokulungiselela "Metamax" ngezinhlobo ezahlukene zokukhululwa. Ukukhuluma ngama-capsules, imishanguzo efana ne "Metonat", "Mildronate", "Mildralex", "Vasonat", "Trimedronate", "Celebis" iyoba indawo eyanele ye "Metamax". Uhlu, yiqiniso, akusilo lokugcina, lungagcinwa.
Emaphilisi, imithi ephumelelayo efana ne-Trizipine, i-Mildrazin, ne-Mildronate ingaba yizifaniso eziphumelelayo.
Uhlobo olubanzi lwezithombe ezifanayo kuMetamax lutholakala phakathi kwezixazululo ezingenakulungiswa. Imiyalo yokusetshenziswa kwe- "Metamax" lapha ibhekiselwa kwimithi enjenge "Metonat", "Mildronate", "Myocardial", "Trizipin", "Mildrakor", "Mildralex". Ngokuvamile, ngokuthuthukiswa kwezinto eziphilayo, i-microbiology, nezinye izimboni ezihlobene nokuthuthukiswa kwamakhemikhali amasha amakhemikhali, uhlu lwamalungiselelo e-analog lukhula njalo futhi lukhula ngokushesha.
Umbono weziguli mayelana ne- "Metamax"
"I-Metamax", okusetshenziselwa ukuthi ilungele uhlu olubanzi lwezifo zomzimba womuntu, luneziguli ezimbili kanye nabantu abanomthelela omncane noma ongenasici kusuka kulolu hlelo lokusebenza.
Iqembu elihlukile leziguli lahlala lijabule kakhulu ngomphumela wokusebenzisa imithi. Abantu abanezinkinga ze-cardiovascular system bakhuluma ngokuzethemba mayelana ne "Metamax". Ukuqina kwemibonakalo ye-hypertension, i-angina pectoris, i-fibrillation ye-atrial ehle kakhulu ngokuqala kwesidakamizwa "i-Metamax". Ku-ampoules (imfundo iqukethe ulwazi olunjalo), umphumela omuhle ubonakala njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi ekwelapheni kwesifo somzimba we-myocardial dystrophy.
Futhi ube nombala omuhle wezimpendulo zeziguli mayelana "ne-Methamax" uma uhoxiswa izimpawu zokuhoxiswa ekudakwa ngokweqile. Waphendula kahle ngesidakamizwa ngabadlali abaqeqeshiwe, abenza imisebenzi yabo baphoqeleka ukuba bakhuthazelele ukucindezeleka okukhulu ngokomzimba nangokomzwelo. Ukwelashwa ngokusetshenziswa kwe- "Metamax" yezibonakaliso ezibangelwa i-asthma ye-bronchial iyasebenza.
Abathengi ngabanye abavamile, kodwa nokho bekukhona neminye imiphumela emibi. Ngokuvamile kwakungokwenyuka kwezinga lentliziyo, ukwehla okuthile ekucindezelekeni kwegazi nokuphambana okuncane emisebenzini yamathambo emathunjini. Ngezinye izikhathi ungase uzwe ngokushona esikhumbeni.
Imfundo yokusetshenziswa kwe- "Methamax" ibeka izidakamizwa njengomkhiqizo wanamuhla wokwelapha onethonya elibanzi kakhulu lethonya. Ukusetshenziswa okungalawulwa okungaqondakali kungashintsha izinkinga ezinkulu emzimbeni womuntu wonke kanye nezitho ezithile ngokukhethekile. Ngakho-ke, ukuze ugweme izinkinga ezinjalo, ukuqokwa ukuba uthole "i-Metamax" kufanele kwenziwe ngudokotela oya khona. Kuphela ngalolu hlelo uhlelo lokudla kwezidakamizwa luzothuthukiswa ngendlela efanele futhi i-dose yayo ephumelelayo iyokhethwa, okuzokwenza ukuba kutholakale umphumela omuhle kakhulu ukwelashwa, ukunciphisa amathuba okutholakala nokuthuthukiswa kwemiphumela emibi.
Imfundo yokusetshenziswa kwe- "Metamax" ichaza ukuthi kungenzeka ukuqhuba izifundo zokwelapha eziphindaphindiwe (izikhathi ezingu-2-3) unyaka owodwa. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi isiguli singakwazi ukubeka lezi zifundo eziphindaphindiwe ngokuphindaphindiwe, ngaphandle kokubonisana nochwepheshe. Ukuqokwa ukuba uthole "i-Metamax" (njengoba, ngempela, noma yimuphi umkhiqizo wokwelapha) kungukuthi udokotela.
Analog engabizi "Duspatalin": ukulinganisa, ukubunjwa, imiyalelo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Call Of Cthulhu: ukudlula omunye imidlalo kunazo zonke ngesikhathi
Izintambo zokugxila: izinhlobo nezinhloso